Gravit Dhizaini: Yakaisvonaka Muchinjikwa-Platform Dhizaini Yekushandisa | Kubva kuLinux
Gravit Dhizaini: Yakaisvonaka Muchinjikwa-Platform Dhizaini Yekushandisa
Chimwe chezvikonzero zvinonyanya kuratidzwa zve vanhu vasingade kuchinjira kuLinux imhaka yekuti"Kushaikwa kwemifananidzo yekugadzira mifananidzo" Ichokwadi icho vazhinji vevagadziri havaiti shanduko nekuti maturusi eAdobe haawanike yeLinux.
Asi chokwadi ndechokuti MuLinux isu tine kusiyana kwakanyanya kwekushandisa uko kunogona kuve kwakanyanya kunaka dzimwe nzira (chenjera, neizvi handireve kuti ivo vakaenzana kana vakakwirira). Pakati pezvakanakisa kuzivikanwa tinogona kuwana Gimp uye dzimwe mhinduro dzeCADAsi ivo havasi vanogara vari chishandiso chakakodzera chebasa.
Panyaya yevector kudhirowa, tinogona kushandisa chakanakisa chishandiso chinonzi Gravit icho chinotarisira kuve imwe nzira kune Adobe Freehand, Fireworks uye zvakafanana zvirongwa.
1 Nezve Gravit Dhizaini
2 Maitiro ekuisa Gravit paLinux?
3 Maitiro ekubvisa Gravit dhizaini kubva kuLinux?
Nezve Gravit Dhizaini
Gravit zvakare yemahara multiplatform application uye ayo makuru maficha ari echimiro mamiriro uye ine huremu injini izvo zvinoita kuti application iite zvirinani mukati meiyo system.
Kunge mamwe anozivikanwa ekugadzira maturusi, Gravit anoshandisa madiki mabhatani uye ma icon, saka rinotaridzika zvirinani pane epamusoro-resolution skrini.
Nzvimbo yekudhirowa iri pakati, ine toolbar kuruboshwe, zvishandiso zvekushandisa zvinogona kuwanikwa pazasi, zvidimbu uye sarudzo peji pane kurudyi, sarudzo dzekuenzanisa, shandura, kutumira kunze, masampuli, masitaera uye dialogs pazasi pake.
Kune mashoma mashoma mamenyu pane iyo huru menyu bar kubva kwaunogona kucheka, kunama nekudzokorora zvinhu zvakasarudzwa, pamwe nekuzvironga nekuzvimisikidza.
Idzi sarudzo imwechete inowanikwa mubato repadivi kurudyi. Iyo "Tarisa" menyu inopa akati wandei sarudzo yekutarisa kuti zvive nyore kudzora basa rako.
Iyo iconic toolbar kuruboshwe ndiyo yekutanga nzvimbo yekuwana yezvakawanda zveGravit maficha.
Kusanganisira sarudzo dzemagwaro, Selection chishandiso, Lasso chishandiso, Shanduko chishandiso, Zvishandiso (penzura, mutsetse, marange, madenderedzwa), kudhirowa zvinyorwa, uye pakupedzisira kukudza uye kutsemura maturusi.
Mimwe mifananidzo ine museve mudiki pakona izvi zvinoreva kuti vane submenu inogona kumisikidzwa nekubata kuruboshwe pikicha.
Gravit parizvino iri yayo vhezheni 3.4.0 uye mune iyi vhezheni nyowani ine iri nani SVG kuburitsa neiri ese mazita ehurongwa anotumirwa seID.
Madenderedzwa uye kupera zvino vatora yavo SVG chitaridzi, kana yaendeswa kunze mune iyi fomati.
Zvakare neiyi vhezheni nyowani kutumira kunePDF kwakagadziridzwa, iko iko nemhando yemumvuri uye mitsara yakagadziridzwa kunyangwe iyo yekuendesa kunze kune makuru mafomati.
Maitiro ekuisa Gravit paLinux?
Si iwe unoda kuisa ichi chinoshamisa chishandiso pane yako system tinogona kuzviita zvinotevera. Wokutanga wavo ari kutitsigira neSpap mapakeji kuti tikwanise kuwana iyi application mune yedu system.
Nokuda kweizvi zvinodikanwa kuti isu tine rutsigiro kuti tikwanise kuisa mapakeji kubva kuSnap. Kana izvi zvangoitwa, isu tinogona kuenderera nekuisa iko kunyorera nekuita inotevera mirairo:
Para gadza iyo yakagadzika vhezheni yechirongwa, uchishandisa uyu murairo:
Kana paine zviripo vhezheni vhezheni yechirongwa, tinoiisa tichishandisa uyu wekuraira:
sudo snap install gravit-designer --candidate
Isa beta vhezheni yechirongwa kana chiripo, uchishandisa uyu murairo:
sudo snap install gravit-designer --beta
Gare gare, kana chirongwa ichi chichifanira kuvandudzwa, shandisa:
sudo snap refresh gravit-designer
Pamusoro peiyi nzira yekumisikidza, zvinokwanisika kushandisa application kubva pawebhusaiti, isu tinongofanira kuenda next link.
Maitiro ekubvisa Gravit dhizaini kubva kuLinux?
Kana iwe uchida kubvisa ichi chishandiso kubva kune yako system, iwe unofanirwa kuvhura terminal uye nekuteedzera inotevera yekubvisa rairo mairi:
Uye voila, ivo vanenge vatobvisa kunyorera kubva kumasystem avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » Gravit Dhizaini: Yakaisvonaka Muchinjikwa-Platform Dhizaini Yekushandisa
Ndinoonga misoro yese yakatumirwa kwandiri zuva nezuva! Ndiri newbie ku linux ubuntu uye ini ndiri kutanga kutama kubva ku microsoft kuenda kune gnu / linux uye zvigadzirwa zvayo zvema distros! Kwaziso. Cricket (zita remadunhurirwa)
Pindura kune elsantouy3
Ndakaedza chishandiso ichi uye chinoshamisa, asi pane chimwe chinhu chinoita kuti ndide kuziva, isiri software yemahara, ndeupi mutero wemubhadharo une avo vanogadzira?
Ichokwadi, kune imwe nhanho kodhi yekodhi yekushandisa yakagovaniswa uye kugoverwa paGithub, asi yakangobviswa uye ini handina kuwana zvimwe nezvazvo. Ndosaka ini ndisingashinga kutaura kana yakavharwa kana yakavhurwa sosi, nekuti hapana ruzivo rwakawanda nezvazvo.
Munguva pfupi yapfuura chete yakawanikwa naCorel uye chirongwa ichi chiri chemahara.
Julius waJesu akadaro
Ini ndakasiyana zvachose nekutaura pane zvishandiso zveAdobe… Inkscape, Gimp, Synfig, Blender, Krita, Auacity, pakati pevamwe, ivo vanodarika kwete kwete chete ekunyepedzera eAdobe, asi zvakare AVID.
Pindura kuna Julio de Jesús
Muchokwadi, ini handina kumbotaura kuti vaive vakaderera kana vakakwirira, chishandiso chimwe nechimwe chine tarisiro uye poindi yekushandisa, dzinongova nzira dzemahara.
Mazhinji mashandisirwo esoftware akashandiswa pamazita emafirimu akasiyana siyana akadai seGimp, Maya, Liquid, DrQueue uye Blender, kuti tikwanise kunzwisisa kukura kwemashandisirwo awo.
Haisi yemahara, dai yaive yaizouya neGPL, Mozilla kana rezinesi rakafanana. Kana paine kusahadzika haina kusununguka zvakananga, nemutemo zvirongwa zvacho hazvisi zvemahara nekutadza, kana vasina chavataura saka ivo havana kusununguka.
5 mafomu ekuti ubatanidze kure kune desktop yako kubva kuLinux
5 Linux kugovera kufema hupenyu hutsva muPC yako inotambira mari